TTSweet: Accident နဲ့ အစွဲ ...
Posted by T T Sweet at 4:24 PM
Vista August 26, 2010 at 5:06 PM
ချစ်စရာရှားလို့ စစ်စကို ကြီးမှ သွားချစ်တာကိုး တီဆွိရဲ့ 
ဝက်ဝံလေး August 26, 2010 at 6:02 PM
အိမ်းးး မဆွိရေ နိုင်ငံခြားမှာကတော့ ဂလိုပါပဲ
မီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုက်ခဲ့တာဂျ လူလဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး တခြားကားလဲ အဟုတ်ပါဘူး အုတ်နံရံဝင်ကျုံးတာ ဟိဟိ
ဖိုးတုတ် August 26, 2010 at 10:41 PM
ဟိုအရင်ကတော့ သူဌေးကား ကို တစ်ခါတစ်လေ မောင်းပေးရပြီး သူ့ အသိတွေကို လေဆိပ် အကြို အပို. လုပ်ပေးရတယ် လေဆိပ်ကအပြန်မှာ အရှိန်များလို. ရဲက ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်တယ် cash ကဒ်မေ့လို့ဒဏ်တတ်ခံရတယ် အရှိန်များလို့အမြန်နှုန်းကင်မရာက ဓါတ်ပုံရိုက်တာခံရတယ် ခုတော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်မမောင်းချင်တော့လို့ဘောလ်ဘို ၊ မာစီဒီး တို.ကို ဒရိုင်ဘာနဲ့ထဲလဲစီးနေတယ်
မှတ်ချက် ။ ဘောလ်ဘို ၊ မာစီဒီး တို့ ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ကားများ မဟုတ်ပဲ SBS က ဘစ်ကားများသာဖြစ်ပါတယ် ၊
သက်ဝေ August 27, 2010 at 11:04 AM
ကိုယ်လဲ အဲဒီလို အစွဲမျိုးတွေ မှတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်... ရုံးမှာ စကားပြော အဆင်မပြေတဲ့နေ့မှာ ဝတ်တဲ့အင်္ကျီဆို ခုထိ မှတ်မိနေတယ်...
သတိထားမိသလောက် ကိုယ်နဲ့ သိပ်မစေးမကပ်တာကတော့ ခရမ်းရောင်ပဲ...း((
ကားကတော့ သတိထားပြီး ဖြေးဖြေးမောင်းတာကောင်းပါတယ်...
ကိုယ်က မှန်နေပေမယ့်လဲ သူများက မှားလာပြီး တိုက်လဲ ခံရမှာပဲ...တခါတခါမှာတော့ လမ်းရှင်းရင် စိတ်လွတ် လက်လွတ်နဲ့ တရာ ကျော်တွေ ဘာတွေ မောင်းမိတယ်... သတိထားလိုက်မိတော့မှ ပြန်လျှော့ရတယ်..
Sonata Cantata August 27, 2010 at 1:46 PM
အမကတော့ ငယ်ငယ်က နက်ပြာ၊ စိမ်းပုတ်၊ ကြက်သွေးရောင်တွေ ၀တ်မိရင် ကံမကောင်း၊ စိတ်ညစ်ရသလိုပဲ...
အခုတော့ အစွဲတွေ မထားချင်ပေမဲ့ အဲ့ဒီအရောင်တွေလည်း မ၀တ်ဖြစ်တော့သလောက်ပဲ...း)
ပို့စ်ဖတ်ရင်းသတိထားမိတာ တီဆွိက သွေးအေးပုံပဲ...စိတ်အေးအေးထားတတ်တာကောင်းတယ်။
ရန်ကုန်မှာတုန်းက အိမ်နားလမ်းထိပ်မှာတင် ကားမောင်းသင်တာ
လမ်းလယ်ကောင်က တိုင်ဆီကိုပဲ တည့်တည့်ကြီး သွားနေတယ်
ဒါပေမဲ့ ဒုံးဆိုတဲ့ အသံကြီး ကြားလိုက်တော့ ငါတော့ တိုက်ပဟ ပေါ့
လူလည်း တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်သွားတယ်
နောက်မှ ဘယ်ဟုတ်မလဲ နောက်က မောင်းလာတဲ့ ကားက လမ်းဘေး ခြံစည်းရိုးကို ၀င်တိုက်တာ...
သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုတာမျိုးအေ
အဲ့ဒီကတည်းက မသင်တော့တာ...း)
T T Sweet August 27, 2010 at 2:42 PM
အစ်မသီတာရေ ... သွေးကတော့မအေးပါဘူး။ တီစကွဲယားတွေ ဘာတွေပြုတ်ကျတယ်ဆိုတာသာ ကြည့်ပါတော့။ သွေးမအေးတတ်လို့ သွေးအေးအောင် ကြိုးစားတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
အစ်မ ကားမမောင်းရဲတဲ့သူတော်တော်များများကိုကြည့်ရင် အဲလို ကားမောင်းသင်ရင်းနဲ့ တိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု အထိတ်တလန့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံဘူးကြတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကားမောင်းရမှာလုံးဝကြောက်သွားတော့တာ။ ကျွန်မလဲ အရင်က တစ်ခါအတိုက်ခံဘူးတယ်။ တိုက်ပြီးပြီးချင်းတော့ ကြောက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်က မကြောက်ရဘူး.။မကြောက်ရဘူးဆို အားတင်းပြီး မောင်းရတာပဲ။ အစ်မပြန်သင်ကြည့်ပါ။ ဆရာတွေက ဘေးက ဘရိတ်နဲ့ သင်တာပါ။ သင်တဲ့ ကားတွေမှာ ဘရိတ်၂ခုပါတယ်။
မိုးစက်ပွင့် August 28, 2010 at 12:48 PM
တီဆွိပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးမှ ငယ်ငယ်က ၀တ်ဖူးတဲ့ အညိုရောင်အပွင့်အကျှီလေးကို သွားသတိရတယ်။ အစွဲအလန်းတွေ သိပ်မထားတတ်ပေမဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အမြဲအဆင်ပြေတတ်စေခဲ့လို့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ သတိထားပြီးဝတ်လေ့ရှိတယ်... ဘယ်ကိစ္စတွေလဲလို့တော့ မမေးနဲ့ နော်၊ မပြောပြဘူး.. အသေသာသတ်လိုက် (ကြားဖူးတဲ့ ဘယ်သူ့စကားလေးလဲမသိ၊ ကြိုက်လို့ ငှားသုံးလိုက်သည်)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း August 29, 2010 at 1:29 AM
သူများတော့ မတိုက်ဖူးပါဘူး ..ကိုယ့်လာတိုက်တာတော့ ကြုံဖူးတယ်
Could you please explain to me why you don't want to touch the insurance? Here, (at UAE), if something happen, everyone run to insurance and no ones pay from their pocket. We have full insurance and normal. Full insurance is cover for both party (the car you hit and also your car). The other one is just cover only one party (only your car. for the other car you have to pay from your pocket)... Thank you
T T Sweet March 7, 2012 at 12:38 AM
မTsu ရေ ငွေလေးနည်းနည်းနဲ့ အင်ရှူးရန့်ကို claim ရင် ကိုယ့်ဖက်က နာပါတယ်။ အင်ရှုးရန့်ကလဲ claim ပြီးရင် ဒီတိုင်းမနေပါဘူး။ ဈေးတက်ပါတယ်။ claim မရှိရင် discount ရပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က ပြင်ရင် ၁၀၀၀လောက်ကျမှာကို သွား claim လိုက်ရင် သူဈေးတက်တာက နောက်ပိုင်း နှစ်စဉ် တောက်လျှောက်တက်တဲ့ ဈေးအတိုင်းပေးရတာဆိုတော့ တစ်ထောင်ထက်မက ပိုပေးရပါတယ်။ ပိုနာပါတယ်။
Unknown March 7, 2012 at 8:27 PM
hote kae ama.. thank u for explanation. :)